Shiinaha oo Ansixiyay Qorshaha Tamarta Cusboonaysiinta ee Bilyanka Dollar ah | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Tamarta dib loo cusboonaysiin karo, Deegaanka
Wasakheynta Beijing. Isha: http://www.upsocl.com/verde/21-sorprendentes-imagenes-muestran-lo-grave-que-es-la-contaminacion-en-china/
Shiinaha waxaa haysta dhibaatooyin waaweyn oo wasakheynta hawada ah sababta oo ah isha ugu weyn ee ay ka hesho tamarta dhuxusha. Shiinaha oo keliya waxay cuntaa 60% dhuxusha adduunka. Taasi waa sababta ay u tahay inay beddelaan qaabkooda tamarta oo ay ku milmaan dhaqaalaha plurima ee ku sii jeeda kala guurka tamarta.
Sidee looga dhigayaa dhaqaalaha Shiinaha mid sii waaraya? Jawaabtu waxay umuuqataa mid iska cad: sharad tamarta la cusboonaysiin karo. Shiinaha ayaa ku dhawaaqay qorshe malaayiin dollar ah oo lagu horumarinayo cilmi baarista tamarta la cusboonaysiin karo iyo horumarka dalka oo dhan.
1 Dhammaadka shidaalka shidaalka: nabad gelyo dhuxusha
2 Hindise dhaqaale wareegsan iyo shaqo abuur
3 Heerarka wasakheynta wasakhdu waxay ahayd mid aan caadi ahayn
Dhammaadka shidaalka shidaalka: nabad gelyo dhuxusha
Golaha Gobolka Shiinaha ayaa ansixiyay dukumiinti lagu horumarinayo tamarta dib loo cusbooneysiin karo ee dalka oo dhan kaasoo maalgashigu waa 365.000 milyan oo doolar. Miisaaniyaddan waxaa loo qoondeyn doonaa shaqooyin iyo mashaariic ujeeddadeedu ay diiradda saareyso tamarta la cusbooneysiin karo ee ku dhex jira qorshe cusub oo awood u leh inay la dagaallanto wasakheynta jawiga hawada sare ee Shiinaha
Si loo fuliyo mashruucan horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo, waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo kala-guurka tamarta, si kale haddii loo dhigo, yaree isticmaalka dhuxusha illaa ay awoodo, inyar inyar, loogu beddelo tamar nadiif ah.
Dukumiintiga ay ansixiyeen Golaha Gobolka Shiinaha ayaa dejinaya waqtiga kama dambaysta ah ee lagu yareynayo isticmaalka dhuxusha: sanadka 2020. Marka la gaaro 2020, daboolka isticmaalka dhuxusha wuxuu u dhigmaa tamar u dhiganta la soo saaray. qiyaastii 5.000 milyan oo tan oo dhuxul ah. Si loo gaaro hadafkan, Shiinaha waa inuu yareeyaa isticmaalka gudaha 15% halbeegga GDP illaa sanadkaas.
Saamaynta wasakhaynta tareenka. Xigasho: https://mundo.sputniknews.com/asia/201701061066058911-tren-smog-china-shangai/
64% ilaha tamarta ee laga isticmaalo Shiinaha waxaa iska leh dhuxusha. Marka la eego ku tiirsanaanta weyn ee Shiinaha ee shidaalkan foosha, la kulanka ujeeddooyinka dokumentigan ma noqon doono hawl fudud. Sidaa darteed, si loo gaaro ujeeddooyinkan, marka laga reebo dhimista isticmaalka dhuxusha dalka oo dhan, Golaha Gobolka wuxuu soo jeediyay tallaabooyin magdhaw ah sida kordhinta kontaroolada qiiqa waxyeellada u leh ee hawada u soo saara warshadaha, horumarinta dhaqaalaha wareega, horumarinta maaraynta kheyraadka iyo waxtarka tamarta iyo taageerada weyn ee xagga maalgelinta siyaasadaha iyo horumarka farsamada.
Hindise dhaqaale wareegsan iyo shaqo abuur
Hindisaha Golaha Deegaanka ayaa abuuri doona in ka badan 13 milyan oo shaqo si loo fuliyo ujeedooyinkan adag. Thanks to keydsiga tamarta iyo yareynta qiiqa, mashaariicda hal-abuurka tikniyoolajiyadda ayaa lagu maalgelin karaa, iyaduna, dib u quudinta qulqulka horumarkan ee tamarta la cusboonaysiin karo.
Horumarinta dhaqaalaha wareegtada ah ayaa u roonaan doonta Shiinaha oo ku saleysan fidinta silsiladda qiimaha dhammaan alaabada iyo dib u isticmaalidda qashinka si loo yareeyo qashinka lagu daadinayo deegaanka iyo, wixii ka sarreeya, keydinta alaabta ceyriinka ah iyo ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah. .
Ururka deegaanka Greenpeace ayaa kaqeybgalay saxiixa qorshaha wuxuuna xaqiijiyay in hogaaminta Shiinaha ay jiheyn wanaagsan u dareyso kala guurka tamarta. Taasi waa in la yiraahdo, dhiirigelinta iyo ujeeddooyinku waa kuwo aad u wanaagsan oo lagu qiimeeyo deegaanka. Wuxuu sidoo kale tixgelinayaa in natiijooyinka laga helay qorshahan ay noqdaan kuwo midho dhal leh xag dhaqaale iyo bey'adeedba, inay jirto ballaarin ballaaran oo tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo dhiirigelin weyn iyo xoojinta yareynta qiiqa gaaska lagu sii daayo. Sidan oo kale, ma aha oo kaliya in tayada nolosha ee Aasiya weyn la hagaajin doono, laakiin waxay sidoo kale gacan ka geysan doontaa joojinta saameynta isbeddelka cimilada ee heer caalami ah isla markaana markeeda lala kulmo ujeeddooyinka Heshiiska Paris.
Heerarka wasakheynta wasakhdu waxay ahayd mid aan caadi ahayn
Shiinaha waxaa soo maray dhacdooyin hawada wasakheysan oo cirka ku jira tan iyo bishii Diseembar ee la soo dhaafay. Bilahaan waxaa calaamadeeyay wasakheynta sare ee waqooyiga iyo bartamaha Shiinaha. Heerarka wasakhda ayaa aad u sarreeyay oo waxay ka gudbeen xadka ay dejisay WHO 14 jeer ka badan inta ay ku talinayaan. Magaalada Beijing, mas'uuliyiinta ayaa kordhiyay digniinta oranjiga.
Waxa ugu xun ee tan ku saabsan ayaa ah in isku-uruurinta wasakhaynta ay sabab u tahay PM 2.5 walxaha (iyagu waa kuwa ugu waxyeellada badan maadaama ay dhexroor yar yar yihiin awoodi karaan inay gaaraan sambabka sambabada oo ay u keenaan dhibaatooyin wadnaha-neefsashada iyo xididdada dhiigga) waxayna yimaadeen ku uruurinta 343 mikrogram halkii mitir kuyuubik, 14 jeer ka badan intii ay ku talisay WHO.
Muwaadiniinta Shiinaha waxay u baahan yihiin waji dabool si ay ugu soo baxaan jidadka. Source: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/21/actualidad/1482303055_225965.html
Kuwa ugu badan ee wasakheynta hawadu saameysay waa carruur. Taasi waa sababta ay u bilaabeen in la rakibo tallaabooyinka ka hortagga wasakhda, sida rakibidda qalabka hawada lagu nadiifiyo ee dugsiyada. Waalidiin badan ayaa ka cawda, in kasta oo ay xaqiiqda tahay in dugsiyadu leeyihiin tiknoolajiyad ku filan oo ay ku bari karaan fasalo guryahooda internetka marka digniinta cas ee faddaraynta lagu dhawaaqo, maamulku sanado ayuu qaatay adoo adeegsanaya cabirkan aad ufudud.
Halkan waxaad ku haysataa fiidiyoow, oo xitaa haddii ay tahay laga bilaabo 2015, uu ku tusinayo sawirro rikoodh ah oo Shiinaha u jabiyay wasakheynta hawada
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Shiinaha Ayaa Ansixiyay Qorshaha Tamarta Cusboonaysiinta ee Bilyanka Dollar ah